Email marketing bụ egwuregwu ọbara. N'ime afọ 20 gara aga, naanị ihe gbanwere site na email bụ nke ahụ dị mma ndị na-ezigara email na-aga n'ihu na-ata ndị ọzọ ahụhụ site n'aka ndị na-enye ọrụ email. Ezie na ndị ISP na ESP nwere ike ịhazi ihe ma ha chọọ, ha anaghị eme ya. Nsonaazụ bụ na enwere mmekọrịta mmegide n'etiti ha abụọ. Ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) gbochie ndị na-enye ọrụ Email (ESPs)… wee manye ESP igbochi ndị ahịa.
Ọ dịghị mfe dịka ịpụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ebe dị ka nke anyị na ndị mmekọ na ndị mmekọ na ndị na-ere ahịa na ndị ahịa. Anyị anaghị enye ha ohere na listi anyị, mana ọtụtụ oge anyị na-anakọta adreesị email ọnụ iji gbasaa mgbasa ozi. Nke ahụ bụ nnukwu isi ọwụwa. Ndị na-enye ọrụ email anaghị eche banyere usoro optin gị ma ọ bụ ụzọ nyocha gị; nanị ihe ha na-eche bụ na ị bụ onye spam.
ESP dị ka Mailchimp emejuputala ọgụgụ isi na adreesị ozi-e na sistemụ a na-akpọ Omnivore. Site na Omnivore, Mailchimp zipụrụ ịdọ aka na ntị 50,000 wee mechie akaụntụ ọjọọ dị 45,905 n'ime otu afọ naanị. Ha nwere ike ịkwalite n'eziokwu na akụkọ ndị ahụ dị obi ọjọọ… M ga-arụ ụka na ọtụtụ n'ime ha bụ naanị ụlọ ọrụ na-eziga aha ha ma ghara iji usoro kachasị mma.
Dị ka Jupiter Research si kwuo, ihe karịrị pasent 20 nke ndebanye aha email nwere ndenye, syntax, ngalaba na njehie ndị ọzọ. Ime ihe dị mfe dịka izipu na ndepụta ochie ebe otu ụzọ mbata adreesị email nwere ike ịtọ ha ụzọ. Nke ahụ abụghị obi ojoo. Notghara ịkọ bots n'ebe ahụ na-akpali adreesị ozi-e SPAM site na sistemụ kwa ụbọchị iji nwalee ma jide gị. Ihe nzuzu, n'echiche m, bụ na ekwenyere m na ọ dịịrị onye SPAMMER mfe ịnweta email na igbe mbata gị karịa ụlọ ọrụ na-ezigara ozi ziri ezi.
Ndị na-enye ọrụ Email anaghị akwụwa aka ọtọ banyere ọnụego mbata ha, kwa. Ọtụtụ mgbe, ha ga-amata a 99% nnweta mgbapụta, ma obere ebipụta na-ekwu na ọ bụ mgbe email ole na ole zigara. Ọfọn, duh… mbụ na-eziga ijide adabaghị adreesị email! Onu ogugu nnabata maka a Akara Ziga nke 91 ma ọ bụ karịa bụ 88%. Inwe 1% nke ndepụta ihe ọjọọ gị nwere ike dobe nnyefe gị site na ihe karịrị 10%!
Obi dị m ụtọ, enwere nyocha email ma depụta ndị na-enye ọcha n'ahịa ndị na-achịkọta ọgụgụ isi ga - enyere gị aka ihichapụta ndepụta gị tupu ejide gị na ọgbaghara a. Buru n'uche na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti nkwado email site na oru nkwenye email. Nkwado email gosipụtara na e wuru adreesị ozi-e nke ọma, ebe nkwenye email na-eji usoro iji kọwaa ọ ga-eweta.
Mbugharị - Ọ bụrụ na ị na-akwaga onye na - eweta ọrụ ọhụụ, nhicha ndepụta email bụ usoro dị mkpa na gị Atụmatụ IP na-ekpo ọkụ.
Ọnụ ọgụgụ dị ala na-emeghe - Ọ bụrụ na ị naghị atụ ọnụego igbe igbe gị ma nwee ọnụego mmeghe dị ala, ozi ịntanetị gị nwere ike ịga na folda junk n'ihi ọtụtụ ọnyà spam na adreesị ozi-e bounced.
Re-Njikọ aka - Ọ bụrụ n’inwere ndepụta ị na-ezipụbeghị na ọnwa, ị ga-achọ ịsachapụ ndepụta ahụ iji zere ọgbụgba na ụba nke nwere ike imetụta ọnụego gị.
Mmekọrịta - nnukwu nhazi nke adreesị email bụ otu ihe, mana ọ bụrụ na ị nwere ike iwekọta sistemụ gị niile na ebe ntinye ebe ị na-achịkọta adreesị email, nke ahụ bụ usoro ka rụọ ọrụ nke ọma.
Azụmaahịa - Jiri onye na-enyocha email a pụrụ ịdabere na ya hichaa ndepụta email gị. Nyochaa ozi-e enyi na enyi yana ngwa nhicha ndetu na-enyere gị aka ịnọgide na-enwe nkwurịta okwu ma jiri nwayọ na ngwa ngwa bịakwute ezigbo mmadụ.
Ndabere data - Kwado ndepụta email gị ngwa ngwa. Jikọọ Mailchimp ma ọ bụ Kpọtụrụ na mgbe niile akaụntụ maka nlekota na-aga n'ihu na ndezi ndepụta.
Onye nyocha email - sachaa ma wepu adreesị email na-enweghị isi site na ndepụta ahịa gị
Tags: Na-aga n'ihuMgbasa Ozi Arụ ỌrụọrụaeroleadsAgile-CrmAiva-ụlọ nyochaamplizautopilotAWeberBọmBọmibiaghachiagbakeeGbanweebrontomgbasa Ozi Nyochaaisi ikeAhịandepụta dị ọchahichaa ndepụta ahụEbumnuchePịaFunnelsGndị CognitoKpọtụrụ na mgbe niilena kọntaktịConvertKitEmechiri yankwado dataNdabere dataDEAnnapụtaEnwere ike ịza emailNchọpụta enwere ike ịchọta emailntapuỊdị ọchaadreesị ozi ịntanetịadreesị ozi-e ọchaemail azịzaemail nyochaemail nhicha apiozi nnapụta emailemail hippoemail dị ọchaemail ndepụta nyochaaemail nkwadoemail nkwenyenkwenye emailemail nkwenye apiemail yoyoemailhippospnwee ahụmịheDesdịAchọpụtaAdreesị ọhụrụGburugburuNchịkwaNa-achịkwa-Dị GoogleIsi mmaliteokpokoroaghaKpọtụrụAkpọtụrụ-Proechichentinye igbeNghọtaNtughariájáispJotFormemail njakịrịjunk email nzachaọkpọKickofflabsoziomanhicha nhichansacha ọchadepụta ịdị ọchaonye nlele ozimailchimpmailerlitemailjetNzipu oziahịaMoosendNocrimiompempe akwụkwọIkeihe akaebeproofy.ioqasQualaroonkwenye email ngwa ngwaNgwa ngwaNtuziaka-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321Mgbanwe nke RFC 5322 RFC 2821RFC 6531Mgbaghara ahịaziri oziSendGridZipu oziIzipunkọtọIgha oziNjem SmartsurveyKpoospamọnyà spamadreesị email ọnyàUdochukwugbasiaronNyocha-Ebe ọ bụlaadreesị email nwa ogeonye nlereụlọ eluezi oziụdị ụdịadịghị amaNyochaa ndepụta emailnyochanyochaa emailvetikal nzaghachivetikalọhụụ 6WooboxwuowuliteikeOnyebuchiZoho CRMFordị Zoho
Ezigbo nkọwa, Doug. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmara nke ahụ
ịzenarị na imeri nsogbu nnapụta email chọrọ ihe sara mbara
ịdị ọcha email, mgbazi na ọrụ nkwado megidere naanị “pinging”
(ie SMTP checks) nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndepụta gị na-enye. Nlele SMTP na-enye naanị ozi na
ma adreesị ozi-e bụ ịnapụta n'otu oge na izi ezi nke
Nsonaazụ ndị a ka na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ ka ọtụtụ ndị ISP na-eme ihe ọ bụla ha nwere ike ime
iji mebie omume a. Ọzọkwa, bounces abụghị ihe otiti nke email
ndị na-ere ahịa dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile daa nke ọma n'okpuru ọnụ ụzọ bounce kwere
site na ISPs.
Nsogbu kachasị na-eche ihu
Ndị ahịa email na-esite na adreesị ozi-e nwere nsogbu (dịka ọnyà spam, ebe nchekwa mmanụ aṅụ,
ndị na-eme mkpesa spam dị arọ, adreesị ọjọọ, wdg) na faịlụ ha yana n'amaghị ama
njehie ịdị ọcha dị ka adreesị ndị a na-enyefe bụ ndị Spamhaus na
Òtù ndị ọzọ na-enyocha spam na-eji na-achụpụ ndị spammers na ngwa ngwa na
Ka ịnọpụ na radar nke
ụlọ ọrụ na-enyocha spam ma si otú ahụ na-ebuli ohere ị ga-enweta na ya
ego ha nwetara, mmadụ kwesịrị ịrụ ọrụ na ịdị ọcha email, mgbazi na nkwado
onye na-emepụta ihe nwere ike:
adreesị site na ịbanye na nchekwa data gị wee kpochapụ ndị nwere
2) typos ziri ezi na
njehie ịdị ọcha ndị ọzọ dị ka Spamhaus atụgharịala ọtụtụ n'ime ederede edekarị
3) Kwado nke ahụ
nnabata nke adreesị ozi-e ọ bụla site na ịlele megidere email kpọmkwem
mmemme (dịka imeghe, ọpịpị, bounces, mkpesa spam, wdg), akụkọ ihe mere eme
Archive nke MX na SMTP checks, na ezigbo oge SMTP checks.
Ọnụ maka ọrụ dị n'elu
na-amalite na penny kwa adreesị ozi-e wee daa nke ukwuu na olu
onye na-ahụ maka ọrụ nke ọrụ ya adịghị na ezigbo oge, ogbe akpaaka
(ya bụ 24x7x365), na ụdị ọrụ batch zuru oke, nke gụnyere akwụkwọ ntuziaka
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ
mbọ ịre ahịa email gị na-enweta ROI kacha mma yana opekempe
Ọnụ ego, nsogbu, na ihe egwu, imekọ ihe na ụlọ ọrụ ịdị ọcha email ga-egosipụta
ka ọ bụrụ obere ego kacha mma ị nwere ike ime.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara otu 25% nke
ụlọ ọrụ Fortune 100 yana ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa, ndị ukwu na ndị nta, bụ
idowe ọdụ data email ha ka ọ dị ọhụrụ na nke ọhụrụ, lee http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Hi Doug na Billkaplan,
I nwekwara ike ihu http://www.mailboxvalidator.com maka ọrụ nhicha ndetu email.
gbakwunyere, daalụ Scotty!
Daalụ maka ndụmọdụ ndị ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịmụtakwu banyere ịzụrụ ma ọ bụ ihicha nchekwa data email ahịa ha, lelee ntuziaka a: http://bit.ly/1Ka27Hh
Julaị 26, 2015, elekere 8:19 nke ehihie
Ị nwara http://www.bulkemailchecker.com ? Agbalịrị m ọrụ ole na ole site na listi gị na mgbe m na-enwechaghị afọ ojuju ma ọ bụ nsonaazụ ma ọ bụ ọnụahịa, m nọgidere na-achọ ma chọta nnukwu Email Checker. Enwere m ike ịsị na nchọ m maka ọrụ nkwado email dị ọnụ ala dị elu agwụla. Anọ m na-eji ha ọnwa anọ gara aga ma enweghị ike inwe obi ụtọ karịa. Lelee ha ma nwee olile anya na ị nwekwara ike ịkwụsị ọchụchọ gị!
Daalụ Doug, nwee ọmarịcha izu ụka!
Julaị 27, 2015, elekere 12:59 nke ehihie
Ọ dị na ndepụta!
Septemba 23, 2015 na 3:34 ehihie
Anọ m ugbu a na-achọ ụlọ ọrụ iji nyochaa ndepụta m ma chọọ ịchọpụta ihe kpatara enweghị afọ ojuju na ụfọdụ ndị na-enye ndị ọzọ? Adị m ọhụrụ na nke a, ọ na-atọkwa m ụtọ ịgafe ọtụtụ weebụsaịtị iji chọpụta ihe na-eme ka ha dị iche. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike kesaa ihe kpatara enweghị afọ ojuju na ndị ọzọ yana ihe kpatara ị na-ahọrọ nnukwu nyocha email karịa saịtị ndị ọzọ niile. Nke a ga-enyere m aka na ikekwe ọtụtụ ndị ọzọ na-agụ nke a. Ahụrụ m na ọnụ ahịa ahụ ka mma na nnukwu Email Checker mana ọ ga-amasị m ịma ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ha ka mma. Daalụ maka ịzaghachi.
Septemba 24, 2015 na 4:17 ehihie
Ndewo Simone, enweelarị ihe egwu jikọtara ya na iji ndepụta ochie ma ọ bụ ndepụta ịzụrụ ihe. Ndị na-enye ọrụ email, n'ọtụtụ akụkụ, na-elelị ụlọ ọrụ ọ bụla na-ebubata adreesị ozi-e na-enyochabeghị. Na ndị na-enye ọrụ ịntanetị na-anabata ozi-e ahụ ga-atụgharị email gị niile ma ọ bụ ọbụna gbochie onye na-eweta gị ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime adreesị ozi-e ndị ahụ ibiaghachi ma ọ bụ kọọ ozi-e dị ka SPAM. N'ihi ya, iji ngwaọrụ nkwenye ndepụta dị oke mkpa mgbe ị na-atụgharị na adreesị ozi-e nke adreesị ozi-e dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ na-ezighi ezi, ị ga-etinye ihe ize ndụ nke ịbụ onye ISP na-egbochi gị na ịchụpụ gị na ndị na-eweta ọrụ email ha.
Septemba 1, 2015 na 11:27 ehihie
Daalụ maka ndepụta ahụ !! Enwere m ajụjụ. Achọrọ m ịmalite ọrụ nhicha email nke m. Ị nwere ike ịkwado ezigbo ngwanrọ ịzụta. Ahụbeghị m chi ọ bụla ruo ugbu a. Achọrọ m ka ọ akpaghị aka ka enwere ike. Daalụ
Ndewo Josh, Amaghị m ihe ọ bụla na-apụ apụ, mana ikekwe otu n'ime ọrụ ndị edepụtara ebe a nwere API ma ọ bụ na-enye ngwọta White Label. Nke ahụ ga-enye gị ohere ịkọwa azịza ya dị ka nke gị.
Ụzọ dị mfe iji lelee adreesị ozi-e nchekwa data, Ihe nlele email kachasị elu. Ihe akaebe.io.
Anyị nọ na ule beta ugbu a mana anyị nwere ụzọ nnwale kacha mma.
Anyị chọrọ nzaghachi. Ị nwere ike nweta ịnye ego iji nwalee ọrụ ahụ.
Septemba 17, 2015 na 1:20 ehihie
Mee ka anyị mara mgbe ị kwụsịrị beta, anyị ga-agbakwunye gị na ndepụta ndị na-eweta!
Agara m na saịtị gị iji nwalee ọrụ gị - enweghị nọmba ekwentị. Ọ bụ ukwuu eleghi anya na onye ọ bụla ga-dị nnọọ bulite ndepụta nke ndị debanyere aha gị na saịtị na-enweghị emetụ isi na ihe akaụntụ njikwa ma ọ bụ onye validate na m bụghị nanị na-enye m debanyere aha na-amaghị isi iyi.
Ọ bụrụ na ị pịa na Kwadoro site na Neverbounce, ị ga-ahụ nọmba ekwentị ha na mmanya igodo ha.
Nọvemba 5, 2015 na 7:27 nke ụtụtụ
Ndewo Douglas. Ọ tụrụ m n'anya na ị kwughị Verifalia na listi gị. Ọ bụghị naanị na ọ dị ka otu n'ime ndị na-enye nkwado email kacha ukwuu na Europe mana ha na-enyekwa atụmatụ pụrụ iche m ahụghị ebe ọ bụla, gụnyere nkwado maka adreesị ozi-e nke na-adịghị eji mkpụrụedemede Latin (anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa na ndepụta anyị sitere na Singapore, Japan na Saudi Arabia, dịka ọmụmaatụ), na ike ịme nkwado dị omimi na-agafe ọtụtụ ngafe, iji kwado adreesị ozi-e nwere okwu nwa oge dị ka igbe ozi n'elu oke ma ọ bụ graylisting. Onye na-eweta a na-ekpughekwa API nkwado email RESTful maka ndị mmepe ngwanrọ na ọba akwụkwọ maka asụsụ mmemme na nyiwe dị ukwuu… na ha nwere atụmatụ efu nke na-abịa na nkwado email n'efu 125 kwa ụbọchị.
Nov 5, 2015 na 7:07 ehihie
Daalụ – anyị atụkwasịla Verifalia na ndepụta!
Nov 25, 2015 na 4:56 ehihie
daalụ maka post a 🙂
Eji m ụfọdụ ndụmọdụ dị na blọgụ a họrọ ọrụ nkwenye ndetu email. Emechara m ịga na emaillistverify.com, ebe enwere m obi ụtọ na ha na ndepụta mbụ m, ndepụta ọ bụla m nwara ịgba ọsọ na ọrụ ha bụ nsogbu, ọkachasị na enweghị m ike ibudata ndepụta nke dị ọcha. ozi-e emechaa. Kedu ihe bụ isi iji ọrụ ha ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịchọpụta nke adreesị ozi-e dị irè? Wezụga nke ahụ, nkwado ha anaghị anabata nke ọma yana ha anaghị etinye uche na ijide ndị ahịa.
Anyị enweela nnukwu chi na Neverbounce… nke ukwuu nke na anyị na ha jikọrọ aka.
Achọrọ m ọrụ efu ma ọ bụ ngwanrọ…. ọ dị mgbe ọ dị?!
Ahụbeghị m ihe ọ bụla.
Nnukwu post! Anọ m na-eche ma m nwere ike iji GetResponse tinye ọrụ dị otú ahụ?
Andrea, ekwere m ya. Echere m na ụzọ ị ga-esi mee ya bụ ka ị na-arụ ọrụ ụdị gị na API nke ụlọ ọrụ nkwenye. Ozugbo eweghachiri email ahụ ka akwadoro, mgbe ahụ ị nwere ike ịkwanye ya na GetResponse.
Ana m eji ugbu a https://www.emailverifierapi.com/ iji nyochaa adreesị ozi-e na ngwa ahịa email nke ụlọ ọrụ 500 nke uba. Enweghị m mkpesa dị ka àgwà ọrụ zuru oke, Otú ọ dị, anyị na-achọ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala nke na-enye otu àgwà ahụ. Ị nwere ike ịtụnye api ọkwa ụlọ ọrụ ọzọ enwere ike iji? "Enterprise grade" bụ isiokwu. Daalụ maka enyemaka gị!
Julaị 12, 2016, elekere 5:58 nke ehihie
Enwere m olileanya, ị na-eme nke ọma, naanị imelite gị, Anyị na-eme usoro nkwenye email anyị.
ebe ị na-adịghị mkpa imefusị gị nnukwu ego. Obi ga-adị m ụtọ ịza gị gbasara usoro anyị ka anyị si arụ ọrụ n'ezie.
Anyị na-enweta ndepụta ahụ n'aka ndị ahịa chọrọ nyochaa ozi-e, wee kpọọ onye na-anabata ya ma ọ bụ onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-anakọta ozi ịntanetị ha bara uru,
site n'ime otu a ka ụbọchị iri na ise gachara, anyị na-elele ya na usoro nkwenye email anyị na-eme Eblast.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mgbagwoju anya ma ọ bụ ajụjụ gbasara nke a gbasara ụgwọ.
Enwere onwe gị iziga anyị mail anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike
Daalụ maka akụkọ! Anọ m na-eji proofy.io ma nwee mmasị na ya. Ahịa maara ihe ọ bụ obere ọnụ na ndị ọzọ na dị ka àgwà na ọsọ.
daalụ nke ukwuu maka Proofy.io
Proofy.io bụ ụlọ ọrụ ojoro. Ọrụ anaghị arụ ọrụ. Akwụla m ụgwọ maka ndenye ego 10000, ebugola m ndepụta nke email 4000 na ọ nọla “Nhazi” maka ụbọchị abụọ gara aga. Enyemaka Live na saịtị na ozi niile gbasara saịtị m nwere ike ịhụ n'ịntanetị, site na Google na-esite na nwoke mgbe niile. akpọrọ Roman (onye nwekwara ike bụrụ onye nwe saịtị ahụ) na enyi ya Anna. Achọtaghị m nyocha ndị ọzọ nwere ike ịkwenye na ekwesịghị m inye ha ego ka ha na-agbachi nkịtị ugbu a. Ha kwuru ihe banyere "programmer na-arụ ọrụ na ihe nkesa ugbu a" ma kemgbe ahụ - ọ dịghị nkwurịta okwu na ọ dịghị ego azụ. Ejila proofy.io!!!
Disemba 20, 2016 na 10:00 mgbede
Daalụ maka ndụmọdụ! ndụmọdụ dị egwu .
Daalụ maka post ahụ!
Anyị na-achọ ụlọ ọrụ nwere ike ịnye akwụkwọ akwadoro nke ọma gbasara na adreesị ozi-e ndị ekwenyesiri ike bara ezigbo uru ma lelee ya.
Ị maara ụlọ ọrụ ọ bụla dị otú ahụ?
Ejighị m n'aka na onye ọ bụla nwere ike ịnye nkwenye gọọmentị ebe ndị mmadụ na-akwụsị iji ozi-e ma na-agbanwe adreesị ozi-e kwa ụbọchị. Nke kachasị mma bụ ikpo okwu na-agbalị ijide mgbanwe adreesị ozi-e yana enwere ike ihichapụ ndepụta gị megide nke ahụ.
Jenụwarị 11, 2017, elekere 11:07 nke abalị
"Ihe mgbagwoju anya, n'uche nke m, bụ na m kwenyere na ọ dịịrị SPAMMER mfe ịnweta email n'ime igbe mbata gị karịa nkezi ụlọ ọrụ na-eziga ozi ziri ezi."
Eleghị anya ị dabara na nke a, mana nke ahụ bụ n'ihi na azụmaahịa niile anaghị eji ahịa email eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ na-ezukarị maka ndepụta ha ka ha wee nwee ike iji ya mee ihe yana ka ha mụta omume kacha mma. Ha (onye ọ bụla) kwesịrị izipu ozi ugboro ugboro.
Mana gbasara ndepụta ngwaọrụ… dị egwu!
Jenụwarị 11, 2017, elekere 11:09 nke abalị
Anyị ga-eso ọkwa a na mkparịta ụka pọdkastị dị ukwuu nke onye isi oche nke Neverbounce, Oscar. Nọrọ na-ekiri!
Echere m na ọ nweghị ụzọ iji nyochaa email gị ozugbo emepụtara acc gị. Ya mere, echere m na ị ga-eme nke a mgbe ịmepụtara acc gị na nzọụkwụ mbụ.
Akụkọ mara mma. Enwere m ike ịma ma ọ bụrụ na ị na onye isi oche nke Neverbounce, Oscar agbala Webinar?
Ana m achọ ozi gbasara ịnwale adreesị ozi-e ozugbo ka onye ahịa ọhụrụ na-abịakwute ụlọ ọrụ m. Ngwanrọ/teknụzụ ahụ dị ka m tinye n'ime ngwanrọ anyị ugbu a? Ma ọ bụ ọ ga-adị mkpa ka anyị gbanwee ngwa ngwa niile anyị dị ugbu a? Ọ mara mma na anyị nwere nsogbu nke otu anyị na-ede na adreesị ozi-e ndị ahịa na-ezighị ezi ma ọ bụ onye ahịa na-eme ya. Ọ ga-amasị m ịkwụsị ya n'ebe ịzụrụ kama ihicha ndepụta ahụ, anyị na-ejide adreesị ozi-e na-adịghị mma kama iru ndị ahịa anyị.
Ọgọstụ 29, 2017 na 12:24 ehihie
Ọ bụrụ na ị na-elele nkwenye email ozugbo, gwa ụmụ okorobịa ahụ na emailchecker.com, enwere m ahụmahụ mbụ n'iji ihe ngwọta oge ha na-eme ihe na nke ọma!
Ndewo Douglas, ezigbo nchịkọta ebe ahụ. Ọ dị m ka ị tụfuru nnukwu onye ọkpụkpọ - http://www.emailverifierapp.com Biko lelee ya. Daalụ
Ọgọstụ 29, 2017 na 12:22 ehihie
Nnukwu akụkọ Doug na-enye ihe ọmụma na ụfọdụ nnukwu nkọwa, Anyị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-edu ndú ma nwee ọtụtụ ibe weebụ na-eme ka ndị ahịa na-anakọta ozi ịntanetị ole na ole kwa ụbọchị! anyị ejirila ụlọ ọrụ ole na ole mana laghachi azụ na ụlọ ọrụ mbụ anyị nke anyị nwalere (ụlọ ọrụ a na-akpọ Email Checker) dị ka achọpụtara na ngwanrọ ha bụ nke ziri ezi na ntụkwasị obi. Anyị na-eji API ha na ibe anyị squeeze yana ngwá ọrụ dị ukwuu maka anyị yana ndị ahịa anyị na-ewu ewu, ha na-enye nkwenye buru ibu yana nke anyị na-eji ụdị oge eme ihe ma anyị na-eji API ha kwa ụbọchị na nnukwu nsonaazụ. Agbanyeghị, achọrọ m ịkọrọ ahụmịhe m dịka m maara na asọmpi dị ukwuu n'ebe ahụ, nye ụmụ okorobịa nọ na emailchecker tie mkpu na webụsaịtị ha bụ. http://www.emailchecker.com gwa ha John Morgan zitere gị 🙂
Nke a bụ ngwa ọzọ bara uru m chọrọ ịtụ aro: https://debounce.io
Ị nwere ike itinye nke a na ndepụta gị?
Achọrọ ịtụ aro otu ngwa maka nkwenye email - https://mailcheck.co
Ha na-agbasawanye na profaịlụ mmekọrịta jikọtara na mail, na-erughị na nlele smtp ozugbo. Ọ na-enye ohere ịnweta ozi ndị ọzọ wee chọpụta na onye nwe email na-arụ ọrụ na gravatar, gmail, wdg.
Daalụ, atụkwasịla m ya!
Enwere m ike itinye otu nnukwu ngwa ọrụ na ndepụta a?
EziMail (https://truemail.io/) bụ ezigbo ngwaọrụ nkwenye email.
Ọ ziri ezi ma dịkwa mfe iji. Ọ ga-ehichapụ ndepụta gị ngwa ngwa site na adreesị ozi-e na-ezighi ezi na nke dị ize ndụ.
Site n'ụzọ, ọ nwere nkwenye email 1,000 n'efu kwa ọnwa.
Ọgọstụ 6, 2019 na 1:07 ehihie
Daalụ Alona! Etinyere m ha na ndetu nke ọzọ ka ha na-ezo obodo ha ma debe data whois ha na nzuzo.
Ị nwekwara ike iji ọrụ nkwenye a n'efu nyochaa ozi-e: https://www.emailverified.org
Nọvemba 14, 2020 na 5:06 nke ụtụtụ
Ndewo Doug, ọ bụ ihe magburu onwe ya ka i si dobe akụkọ ahụ n'ime afọ ole na ole gara aga na ndị na-eweta ọrụ ọhụrụ, a na m agba mbọ ahụ. Ọ ga-amasị m ịtụ aro ka agbakwunye Antideo na ndepụta ahụ, ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị ọnụ ahịa n'ebe ahụ. Ọkwa n'efu nke na-enye ihe karịrị ndenye nkwado 5000 kwa ọnwa zuru oke maka obere azụmaahịa, yabụ ọ ga-enwe ekele dị ukwuu ma ị nwere ike lelee ọrụ ahụ (www.antideo.com) wee tinye anyị na listi gị ma ị hụ. dabara.
Nov 18, 2020 na 4:41 ehihie
Daalụ, etinyela m ya na ndepụta ahụ. Otu ndetu akụkụ, ọ dị ka saịtị ụlọ ọrụ nne na nna gị agbadala.